Dawladda Maraykanka ayaa aqoonsanaysa dowladda Soomaaliya 21 sano kadib • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Dawladda Maraykanka ayaa aqoonsanaysa dowladda Soomaaliya 21 sano kadib
Dawladda Maraykanka ayaa aqoonsanaysa dowladda Soomaaliya 21 sano kadib
Maamulka Barack Obama ayaa aqoonsaya dowladda Soomaaliya mar labaad muddo 20 sano ka badan oo kala go u dhex galay, waxaana Soomaaliya loo aqoonsadey in ay horumar ka gaartey ka hortegida kooxaha mayalka adag.
Johnnie Carson oo u qaabilsan xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka arrimaha Africa ayaa sheegay in ictrifaaku ka dhacayo maalinta berri ah (Khamiis) Xarunta arrimaha dibadda ee Maraykanka marka Madaxweynaha Soomaaliya la kulmaayo Hillary Clinton.
Dalka Maraykanka ayaan aqoonsaneyn Dowladda Soomaaliya tan iyo markii ay ka curteen dagaaladii sokeeye ee bilowdey 1991.
Johnnie Carson ayaa sheegay in Midowga Africa iyo Maraykanka oo dhaqaale ku kaalmeynaya ay keeneen isbedel weyn, kaas oo ku riixay kooxda al-Shabaab in ay baxsadaan.
Carson ayaa sheegay in ictriaafka la siinayo Soomaaliya ay wax weyn ka caawineyso.
Tan iyo markii la ridey xukuumaddii uu Madaxweynaha ka ahaa Maxamed Siyaad Barre (AUN) waxa dalka Maeraykanku ula dhaqmaayey Soomaaliya sida kooxo oo kale isaga oo xiriir la lahaa dhinacyo badan oo siyaasadda Soomaaliya metalayey.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa safarkiisi u horeeyey ku jooga dalka Maraykanka, waxaana talaabadan lagu tilmaamey guul tarikhi ah.